किराना पसल बन्द हुनेभएपछि खाद्य र साल्ट ट्रेडिङले होम डेलिभरी गर्ने - शैली न्युज
किराना पसल बन्द हुनेभएपछि खाद्य र साल्ट ट्रेडिङले होम डेलिभरी गर्ने
१३ जेष्ठ २०७८, बिहीबार १४:२३
काठमाडौं । कोरोना संक्रमणको दास्रो लहर नरोकिएको भन्दै कडा पारिएको लकडाउनमा किराना पसल पनि बन्द गरिने भएपछि खाद्य र साल्ट ट्रेडिङले होम डेलीभरी गर्ने भएको छ । किराना पसल र डिपार्टमेन्टल स्टोर बन्द गर्ने निर्णयबाट आलोचित प्रशासनले कसैलाई खाद्य सामग्री अभाव भए खरिदका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरेको जनाएको हो ।
नागरिकमा खाद्य सामग्री नै पाइँदैन भन्ने भ्रम गएको भन्दै उपत्यका प्रशासनले नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडबाट अत्यावश्यक सामग्री मगाउन सक्ने गरी व्यवस्था गरेको जनाएको छ । प्रशासनले त्यसका लागि कम्पनीको फोन नम्बर पनि सार्वजनिक गरेको छ ।
नागरिकले खाद्य सामग्री मगाए मोबाइल गाडीबाट घरमै लैजाने व्यवस्था मिलाइएको भनिएको छ । दुई कम्पनीमा चामल, दाल, नेल, नूनलगायत सामग्रीको पर्याप्त मौज्दात रहेको कम्पनीले जनाएका छन् । कोही नागरिक आपतमा परे स्थानीय तहमार्फत वितरणका लागि अनुरोध गर्ने पनि निर्णय भएको छ ।
काठमाडौंका सहयाक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीका अनुसार खाद्य संस्थान, साल्ट ट्रेडिङ, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च र व्यवसायीसमेतको बैठकबाट यो निर्णय गरिएको हो ।
निर्दलीय अभ्यास भयो भन्नेले संविधान पढ्नुस् : देउवा
एमालेका पूर्वसांसद रत्न प्रसाद शर्माको निधन
बाजुरामा भिरबाट खसेको ढुङ्गा लागेर एकको मृत्यु
युरोकप फुटबल: आजदुई खेलहरू हुँदै, को को भिड्दै छन् ?
कुन नदीमा पानीको वहाव कस्तो छ ? हेर्नुस, सतर्कता अपानउनुस!
६ असार २०७८, आईतवार १६:०२
६ असार २०७८, आईतवार १५:५१
६ असार २०७८, आईतवार १५:२८
६ असार २०७८, आईतवार १५:११